အဲ့ဒီမှိုကို ကြာဇံချက်လိုမျိုးရော ငရုတ်ကောင်းနဲ့ အသားနဲ့ တွဲချက်လို့ ရမလား မသိ..
ပြောရင်း ကြာဇံချက်ကို သတိရသွားပြီ..
ငွေမိုးမှို လို့ မြန်မာလိုခေါ်ပါတယ်။
commonly known as the Oyster mushroom ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြူရောင် မျက်နှာပြင်မှိုကို ငွေနှင်းမှိုလို့ ခေါ်ပြီး..အညိုရောင် မီးခိုးမှိုင်းအရောင် မျက်နှာပြင်ရှိတဲ့ မှိုကို ငွေမိုးမှိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စိုက်ပါတယ်။
ညီမရွှန်းမီ---> ဈေးမတက်ပါဘူး ညီမရေ။ အခုလို အေးတဲ့အချိန် ဈေးတော်ပါတယ်။
ဇာခြည်---> ခြေဖဝါးရာ ရှာမတွေ့ဘူး။ :D
မခင်ဦးမေ---> ညက်စိ ဖွင့်သောက်ပါ ချင့်! :)
မသဒ္ဓါ---> ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ။ Wiki မှာ ရှာကြည့်တော့ မတူဘူးလိုဘဲ။ "မအိတကဲ"Maitake ကို Grifola frondosa, commonly known as Hen of the Woods ပါတဲ့။
ငွေမိုးမှိုကို ဂျပန်လို "ဟီရတကဲ" Hiratakeလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ညီမလေးရေ... အင်တာနက်မရလို့.. အခုမှ လာလည်ရတယ်.. :) အဲဒီမှိုချက်နည်းလေးတွေ ရရင် ပြောပြပေးပါဦး.. လောလောဆယ်တော့ မချက်စားဖြစ်သေးဘူး. :D